Dhageyso General Indha Cadde oo si kulul u weeraray Xilhibaanada Baarlamaanka Somaliya |
Dhageyso General Indha Cadde oo si kulul u weeraray Xilhibaanada Baarlamaanka Somaliya
zoloft for sale, dapoxetine without prescription. General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xooga, ayaa wuxuu maanta si kulul uu u weeraray Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Somaliya.
Wuxuu sheegay inay liddi ku yihiin Qaranimada Somaliya, markii uu sheegay inay ka biyo diideen Golaha Wasiirada Somaliya, sababo ku aadan iyaga oo iska dhex waayay liiska magacyada ee Golaha Wasiirada.
“Waxaan arkaa in Qaranimadeenii la burburinaayo ay Baarlamaanka duulimaad ku yihiin Dowladnimadii, oo Qaranimadii duulimaad ku yihiin, oo jiritaankii duulimaad ku yihiin. Marka masuuliyadda i saaran ayaa i tuseysa, kamana aamusi karo.” Ayuu yiri General Yuusuf Maxamed Siyaad.
Waxa kaloo uu yiri “Ra’iisal Wasaaraha tallaabo haboon buu qaaday, laakiin Baarlamaanku tallaabo haboon ma qaadin, waa isbaaro ayaan is lee yahay anigu. Tallaabadii saxda ahaydna maaha, anigu haddaanan waxba helin.”
Waxa uu soo hadalqaaday in Baarlamaanka Somaliya uu ka kooban yahay 275 Xildhibaano, tirada intaa le’egna aynaan suurta gal ahayn inay iska dhex aragto Golaha Wasiirada, taasina ay tahay waxa ay u diidan yihiin meelmarinta Golaha Wasiirada, sida uu yiri.
“Xukuumaddii waxaa diiday Baarlamaanka, dhibka taagan waxaa waaye Baarlamaanku 275 xubnood waaye. 275-ta xubnoodba Wasiiraay rabaan, ninkii iska waayana wuxuu diidayaa Xukuumadda in la meel mariyo, oo shaqeyso.” Ayuu yiri General Indha Cadde.
Jananka, ayaa intaa ku daray “Waxaan cadeynayaa niman Xildhibaano ah ayaa shir jaraa’id qabtay, waxayna dhaheen Xildhibaanadu waa mucaarad iyo muxaafid. Anagu waxaa nahay mucaaradkii.”
Indha Cadde, ayaa waxa uu hadalkaan ku sheegay wareysi uu siiyay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho.